"El Encanto", inoveli yokuqala kaSusana López Rubio | Uncwadi lwangoku
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo yawela ezandleni zam "Umtsalane", inoveli yokuqala ngu USusana López Rubio. Igama lalo mbhali lisenokungavakali liqhelekile kuwe, kodwa sele ebhale iincwadi ezimbini zabantwana "Olona sapho lubalaseleyo emhlabeni" y "UMartín kwihlabathi lezinto ezilahlekileyo". Kukwanjalo umbhali wesikrini kuthotho olubalulekileyo nolwaziwayo njenge «Central Hospital», «Physics okanye Chemistry» o "Amapolisa" phakathi kwabanye.
Ngoku ebefuna ukuzama ithamsanqa lakhe ngohlobo lwebali kwaye uyenza ngale noveli ibekwe eHavana ye Ngama-50. Uthando, umnqweno, imvakalelo yokuziva unetyala, zezinye zeemvakalelo kunye neemvakalelo ezivela kwincwadi ebhalwe ngazwi amabini: leyo ka UPatricio noGloria. Kodwa ukuba ufuna ukufunda i-synopsis yakhe, idatha ethe kratya yencwadi kwaye wazi okungakumbi malunga nabalinganiswa bakhe, qhubeka ufunda kancinci ezantsi.
1.1 Idatha yobuchwephesha yencwadi
1.2 Abanye abalinganiswa
Ngo-1947. Kwizibuko laseHavana, kwehla uPatricio, intombazana encinci uAusturian engenalo nelinye ilifa lemveli ngaphandle komnqweno wakhe wokuthatha umhlaba kwaye engenawo omnye umnqweno ngaphandle kokushiya ngasemva ilali enemigodi isagutyungelwe zizithunzi zexesha elingaphaya kwemfazwe.
Isixeko esiqaqambileyo kwaye sinomoya wokubuk 'iindwendwe siyaphuma simhlangabeze. Isixeko esingaze silale, sinesigqi saso. Kungekudala wenza izihlobo kwaye kwangoko ufumana umsebenzi e-El Encanto, kwivenkile yesebe engumqondiso kunye nebhongo lesixeko. Kancinci kancinci, ngobukrelekrele novelwano, uPatricio uqala ukuphakama kwaye abe nezikhundla zoxanduva olukhulu olumvulela kwihlabathi elitsha kodwa ekwabangela nomona.
U-El Encanto uya kuba sisiseko sentlanganiso yakhe noGloria, ongomnye wabafazi abahle kwaye ngokungathandabuzekiyo owalelweyo kwesi siqithi, kuba umyeni wakhe ngowona mgulukudu uyingozi eHavana, indawo athe mafia aseMntla Melika ajika kuyo yiparadesi yakho yabucala .
Idatha yobuchwephesha yencwadi
Umhla wokupapashwa: 27 April 2017
Inani le amaphepha: 448
Ifomathi: Uqweqwe oluqinileyo ngebhatyi yothuli
Akungombuzo wokutyhila incwadi nge-100%, iya kuphulukana nomlingo wayo,… Kodwa sifuna ukubiza abona bantu babalulekileyo kule ncwadi kwaye sikuxelele kancinci ngabo.
UPatrick: Ekuqaleni kwinoveli, lo mfana u-Asturian uneminyaka eli-19 ubudala. Ufudukela eCuba, ediniwe yimpindezelo kunye nokuhluthwa kwexesha lasemva kwemfazwe laseSpain. Abahlobo bakhe bokuqala elizweni nguGuzmán no-El Grescas, kamva uza kudibana no-Aquilino Entrialgo, omnye wabalingane abasungula iivenkile zase-El Encanto.
Nantsi: Ungomnye wabaqhubi bekheshi e-mall: bencuma, bahlekisa, banobuhlobo… Uqala ukuba ngumhlobo noPatricio, kodwa ngokuhamba kwexesha, imvakalelo iyakhula iye kwenye into.
nyota: Intombazana ekhangeleka ilusizi kwaye intle kakhulu, umfazi weyona gangster iyingozi eHavana, uCésar Valdés. Uneminyaka engama-20 kwaye unentombi, uDaniela.
Thina ngaphakathi Uncwadi lwangokuOkwangoku, sizimisele ukuyifunda kwaye siza kuyiphonononga kungekudala, kunye neenkcukacha ezithe kratya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » "Umtsalane", inoveli yokuqala kaSusana López Rubio
Ndiyigqibile incwadi, bendikade ndiyidla iintsuku. Oko kuguquka kweemvakalelo kunye neemvakalelo, ngentliziyo yam inqindi ... andifuni ukuveza nto, kodwa isiphelo sindenze ndalila njengencwadi khange indenze ndizive ixesha elide. Hook ukusuka kumzuzu wokuqala.
Ndiyayincoma, andizange ndiyeke ukufunda, ndonwaba, yandenza ndacinga ndakhala.
Ukubanjwa kuncinci. Ndiyincoma.
Imvelaphi yegama lokuqala Liane sitsho
Ndandikho kwincwadi elungileyo kwaye yayiluthando ekuqaleni kokubona. U-El Encanto akazange andirhintyele kwigama lokuqala kuphela, kodwa kwagcwalisa intliziyo yam ngeemvakalelo ezininzi. Kwakukudala ndade ndafumana inoveli ke ngoku nayiphi na inoveli endiyifunde koluhlobo lunye kuya kuba nzima ukundenza ndizive ukuba yintoni le indenze ndaziva. Ndiyincoma i-100%.
Libali elilula, elibaliswa kakuhle. Abalinganiswa bayathandeka kwaye ufuna ukugoduka ukuze uqhubeke nokufunda. Uxhaphaza iiCuba kwaye azisoloko zisetyenziswa ngokuchanekileyo. Usebenzisa amagama akwangoku aseCuba ebengekho ngelo xesha kwaye angasetyenziswanga ngabafazi, kungaphantsi kakhulu kwinqanaba eliphezulu njengomlingisi ophambili. Iyothusa loo nto. Ngaphandle koko ndiyacebisa.
Ndiyifunda le ncwadi kwaye ndiyayonwabisa kodwa kuya kufuneka uyenze umsebenzi wakho wesikolo kuba undenza ndikhwaze xa ndifunda iSidriña elo gama alilo Asturian
Ngaba ubusazi iivenkile ezigcina iincwadi zeAmazon?